Shuruucda Cusub ee Buckeye Lake Ohio iyada oo Hawlihii Kaladuwanaa Ay Kordheen
Ohio DNR: Xeerar cusub oo loogu talo galay Buckeye Lake
Waxaa laga yaabaa 1, 2015
Si loo kordhiyo wacyiga amniga loona dhiirrigeliyo fursadda madaddaalada Buckeye Lake, Waaxda Kheyraadka Dabiiciga ee Ohio (ODNR) waxay beddeleysa qawaaniinteeda doomaha ee wabiga Buckeye halka lagu maareeyo koritaanka barkadaha jiilaalka.
ODNR ayaa u qoondeysay oo si sax ah u calaamadayn doonta aag xawaare gaar ah oo ku taal qaybta galbeed ee harada si loogu oggolaado in biyo-wadeyaashu ay ku shaqeeyaan koronto-kayga xawaare ka weyn.
“Su’aal kama taagna, Buckeye Lake waxay noqon doontaa mid qurux badan gobolka Ohio mar haddii biyo xidheen cusub la sameynayo, laakiin waxaan doonayaa inaan qof walba xasuusiyo in harada ay wali u furan tahay ganacsi,” ayuu yidhi Agaasimaha ODNR James Zehringer.
Hawlaha nabaad-dhaafka ah ayaa korodhay harada Buckeye sidoo kale, aagagga firfircoonaanta qulqulka ayaa si sax ah loogu calaamadin doonaa calaamadaha dul sabeeya. Barkadaha ayaa lagula taliyaa inay raacaan dhaqamada badbaadada ugu wanaagsan ee wadista biyaha isla markaana si sax ah u xidhaan jaakada badbaadada nolosha mar kasta inta ay biyuhu dul saaran yihiin.